Anya gị na-agagharị na weebụsaịtị | Martech Zone
Maka ndị na-emepụta ihe, ejiri m n'aka na enwere onye na-eti ha mkpu ka ọ dị iche ma zere iwulite weebụsaịtị nke na-eme ma na-eme dị ka ndị ọzọ. Site na ntanetị ahịa, agbanyela, anyị agụgoro ndị ọbịa anyị ihe karịrị afọ iri ugbu a maka ihe ịtụ anya na weebụsaịtị yana otu esi agagharị nke ọma. Dịka onye ọrụ, ọ nweghị ihe ọ bụla dị ka iwe dị ka ịnwa ịchọta ozi kọntaktị ahụ, pịa azụ na peeji nke obibi, ma ọ bụ nyochaa peeji ahụ n'ụzọ dị mfe mgbe a na-emeghị ya dịka ụkpụrụ nke oge a.
Na infographic n'okpuru, Single Single jikọtara ya na Crazy Egg iji gosipụta ozi bara uru na nsuso anya nke nwere ike inyere gị aka melite ahụmịhe onye ọrụ na weebụsaịtị gị.
Imebe nzaghachi agbakwunyela na mgbagwoju anya a - hụ na ndị na-esepụta ihe eserese ọfụma maka nlele ọ bụla ma nyekwa mmekọrịta nke dị mkpịsị aka aka! Nke ahụ chọrọ ụfọdụ peeji ndị echepụtara nke ọma nke dị mfe ịpịgharịa, chọta ihe ị chọrọ, ma gụọ ma jigide ya.
Gị mmebe nwere ike nwaa ime ihe dị nnọọ iche… ma atụla anya mgbe na metụtara ibiaghachi udu na tọghatara ka ọbịa na-enwe nkụda mmụọ na-ahapụ!
Tags: ara na-agbammegharị anyaanya nsusoFka anya gi n’agharinhazi mmeghachi omumeotuwebụsaịtị f